Indlela yokuvuselela i-laser yasungulwa futhi yagunyazwa yinkampani yaseMelika, umholi wezwe emithi yokwelapha laser. Emtholampilo wanamuhla, indlela yokuhlonza laser isikhumba isetshenziselwa ukuxazulula izinkinga ezahlukene ubuhle bokubukeka, futhi ekulweni nezinguquko gerontological kuba umholi kanye "izinga legolide". Mayelana nokusetshenziswa kwe-laser fractional ku-cosmetology, sizochaza ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Izinqubo zokuvuselela zenziwa ngokusebenzisa idivaysi ekhethekile - i-laser encane, esekelwe emisebeni ye-infrared. Ngosizo lwezinqubo zokudonswa kwe-laser, ukuvuselelwa kwesikhumba kwenziwa ngaphandle kokusebenzisa imiphumela yokuhlinzwa neyomuthi. Inzuzo yale nqubo ukuphumelela kwayo emva kweklasi elifushane futhi akudingeki isikhathi sokuvuselelwa. Ukusetshenziswa kwe-laser kukhuthaza ukwethulwa kwemvelo yemvelo yokuvuselelwa kwezicubu, okubangelwa ukwakheka okuzimele kwe-collagen.
Emithi yokwelapha yanamuhla, azikho izifaniso kule nqubo, ezobhekana nezici ezifanayo futhi zinezinkomba ezinjalo zokusebenza eziphezulu. Lokhu kuyiqiniso, futhi kuqinisekiswa izifundo zokwelashwa. Kule nqubo, ukuhlinzwa akudingeki, kepha umphumela awukubi nakakhulu nakakhulu. E-cosmetology, ukusebenzisa le ndlela cishe yindlela kuphela ephumelelayo yokuqeda amamaki aqhekekile avela esikhumbeni.
Izimpawu zokusetshenziswa kwe-hardware laser rejuvenation
Ngosizo lwezinqubo zokuvuselela laser, kungenzeka ukuxazulula ngempumelelo inkinga yemibimbi ejulile, amamaki alula, amacembe, isisu esiswini, isifuba sesibili. Kwaphela isikhathi eside lezi zinkinga azikwazanga ukuxazululwa ngaphandle kwe-scalpel yomhlinzeki wezinambuzane epulasitiki. Ukuvumelana nokusebenza kwalendlela kuhlolwa isikhathi.
Ukusebenzisa le ndlela, ungakwazi ukuqeda imidwebo ye-acne, uthuthukise isimo sesikhumba ngemuva kokushisa, kanti izibazi akufanele zidlule eminyakeni emithathu edlule.
Abesifazane manje bangabonakala bancane kakhulu kuneminyaka yabo, ngenxa yentuthuko yanamuhla emithi ye-laser.
Ngokuhamba kwesikhathi, esikhunjeni, endaweni eyodwa noma kwenye indawo, kungakha ama-neoplasms: amanetha ezinjenge-cobweb, ama-spot, i-couperose, i-telangiectasia. Konke lokhu kungabhubhisa ngokusebenzisa inqubo yesikhumba se-laser, okufaka ukushisa kwe-thermolifting. Ukucindezeleka, okungukuthi, ukuhlanganiswa kwezicubu zesikhumba, kulawulwa yi-apparatus futhi kukhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen yayo.
Umphumela we-laser on the tissue kuvumela ukuba microcoagulation of izicubu zesikhumba kufezeke, okubangela ekukhiqizeni izicubu collagen yayo. Umonakalo omncane esikhunjeni kusiza ukuqinisekisa ukuhlukanisa. Isikhumba sigcina ikhono lokuzilungisa. Ngalendlela, kukhishwa kancane kancane isikhumba socansi (discoloration) nokubuyiselwa kwesakhiwo sesikhumba.
Inqubo yokwehliswa isikhumba ku-laser fractional isetshenziselwa ukususa amanothi okulula esikhumbeni. Inqubo yokugaya kwayo ayinabuhlungu futhi iphephile. Izikhathi zokususa i-striae zisekelwe ebuchwepheni besebenzisa ukupholisa othintana nabo kanye nokushayela okubushelelezi.
Ukuboniswa esikhunjeni se-laser engxenyeni kungashintsha ngokuphelele i-phenol ukuveza isikhumba. Ngendlela, ukucubungula kuyinkambinkimbi ebuhlungu kakhulu edinga ukubuyiselwa isikhathi eside.
Izinkinga zesakhiwo sesikhumba
Isimo sesikhumba sethu, ukuqina kwayo, kuxhomeke esimweni nasesimweni se-elastin ne-collagen kuwo, ngoba ama-collagen amafomu enza uhlaka lwemvelo. Ikhwalithi ye-hardware ukuchayeka esikhumbeni nge-laser kusiza ukuthuthukisa ithoni yesikhumba sentamo, ubuso, indawo ye-decollete, izandla.
Ukwakhiwa kwamakhola amasha e-collagen ngobudala nangenxa yezici ezihlukahlukene ezimbi zinciphisa, futhi ziyatholakala - zibhujiswa. Ngenxa yalokho, isakhiwo sesikhumba sichithwa. Kuba yi-flabby, ukukhululeka kwayo kungabonakali, imibimbi ibonakala.
Indlela i-laser fractional isebenza ngayo
I-laser imisa ukufudumala futhi igqugquzele izingxenye ezijulile zesikhumba. Ngakho-ke ama-collagen fibers abe yimbi kakhulu futhi ekhudlwana, ekhulisa futhi eqondisa ukuqina kwesikhumba, esebenza ngendlela efana nemithombo.
Umphumela, njengombuso, ubonakala ngemuva kokuqala kokuqala futhi uhlala isikhathi eside. Izinqubo ezintathu noma ezine nomphumela wokuphakamisa kuzohlala izinyanga ezimbalwa, uma kungenjalo isigamu sonyaka.
Ngendlela, ukuphakamisa akusiyo kuphela umphumela weseshini. Izinqubo ezinjalo zivumela ukukhipha amamaki e-skin stretch, okubhekwa njengezinkinga zesikhumba ezinzima kunabo bonke. Ukubukeka kwe-striae nge-creams nokusikhipha umzimba kungavinjelwa kuphela, hhayi kususwe. Ukwelashwa kwe-Laser kubhubhisa ama-stretch amanothi avele muva nje futhi angenaso isikhathi sokumhlophe, nezibazi ngokuphelele. Isimo esijwayelekile sesikhumba sithuthukisa futhi.
Indlela ama-infrared ray asebenza ngayo
Imishanguzo engaphazamiseki ikhuthaza ukushisa okujulile kwendwangu yesikhumba, okwenza ukwakhiwa kwe-collagen, ukubuyiselwa kwesakhiwo sesikhumba, kwandise ukuqina kwayo. Isikhumba siyeka ukulenga entanyeni, emaceleni, esiswini, emathangeni, kusuka ngaphakathi kwamahlombe, i-flaccidity iyanyamalala. Inqubo iqala umphumela we-thermolifting.
Ukuqhathanisa izinkomba zokuvuselela isikhumba se-laser
Kukhona okungahambisani nalokhu kokufeza le ndlela yokuvuselelwa. Lezi zifo ze-psoriasis, isithuthwane, i-oncology. Akunconywa ukwenza le nqubo ngesikhathi sokukhulelwa.
Indlela yokuvuselelwa kwe-laser hardware
Ngaphambi kwenqubo, udinga ukususa izimonyo. Izinzwa ezibuhlungu azivuki, ngakho-ke, i-anesthesia ayifanele isetshenziswe. Uma evezwe ku-laser fractional, umuntu angase azizwe nje ukuzwa okuncane. Masinyane emva kokuphela kweseshini, ubomvu obuncane nokuvuvukala okuncane kusele esikhumbeni, okunyamalala emva kwesikhashana. Futhi imibimbi neminyango iyanyamalala ngokushesha futhi igxiliwe ngaphandle.
Uma inqubo yayihlose ukulungiswa kwezibazi kanye ne-striae, ngemuva kweseshini emaphethelweni omkhakha wokuchayeka abe mhlophe, futhi ngaphakathi kwawo kuyingxenye yesikhumba sombala obomvu. Ngemuva kwezinqubo, kufanele ulandele imiyalelo kadokotela futhi uvuselele isikhumba.
Inqubo yenziwa yi-course kuye ngokuthi yiziphi izinkinga zobuhle kanye nokuthi kunesidingo esingakanani sokuxazulula, futhi esimweni sesikhumba. Njengomthetho, kudingeka izinqubo ezimbili noma ezine.
Phakathi kwamaseshini, kufanele kuthathe isikhathi esithile - amasonto amathathu noma amane, futhi ngemuva kokwelapha kufanele ugweme ukukhanya kwelanga futhi usebenzise ama-sunscreen ngezinga le-SPF elingaphezu kuka-30.
Ungakhetha kanjani amanzi angasese angasese?
Indlela engenza ngokushesha amashiya afaneleke
Imikhiqizo ekhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen
3 Izindebe zomlomo ezingenakuqhathaniswa ezilungile kimi ebusika
Kungani amantombazane ethanda ukuzitholela ngokwawo?
Lezi zinhlamvu ezingabizi zingisize ngibheke omncane
Ukulimaza nokuzuza ama-soya
Indlela yokukhetha ukuvunguza kwesisu
Ithebula lethebula lonyaka omusha
Izinwele zezinwele zezingane ezisefeshini 2016, izithombe zezinwele zezinwele ezithandwa kakhulu, i-Autumn-Winter 2016-2017
I-Hollywood Star Chad uMichael Murray
U-Alexander Ovechkin uhlela ukugubha umshado wonyaka
Izici ze-psychology yengane eneminyaka emithathu ubudala
Ama-Amaretti anama-raspberries nama-mango
Ukudla okuphezulu kwekhalori
Recipe for sauce "Pesto"
EmaTropiki: "i-botani" - umthamo wangaphakathi-2016
Izingubo zasebusika ezingabizi ezinganeni
Indlela yokukhetha i-jacket yezinga eliphezulu
Ukukhulelwa kokukhulelwa kwabesifazane abaneminyaka yobudala
Izimfihlo zokuxhumana okuzethembayo nokulula
Izisekelo ezisetshenziswayo zokusikhipha kanye nokuzicubungula
Ukhathala ngokweqile kuyingozi emzimbeni
I-Appetizer yamaphiko ezinkukhu